Kudzidza kwakavhenganiswa ndiyo nzira yatichange tichiendesa zvidzidzo zvedu kana kudzidza kwevana kuchikanganiswa nedenda reCOVID riri kuenderera mberi. Chikoro chega chega chine basa rekuona kuti kudzidza kwevana kuri kuenderera uye kusingakanganisike. Nzira yatinoita nayo izvi kuPorters Grange zvinoenderana nekuti ndeupi munhu ari kuzviparadzanisa kana kuti iri kirasi, boka regore kana kunyangwe chikoro chese chakatumirwa kumba.
Kana Vanhu Vakange Vasaenda Kuchikoro
Kana munhu achinge asiri kuchikoro nechiratidzo cheCOVID kana vakamirira mhedzisiro yekuedzwa, basa rinenge richiwanikwa kuburikidza nepuratifomu yekudzidza pamhepo, Seesaw. Izvi zvinogona kuwanikwa nekushanya www.seesaw.com uye kutema matanda mukati uchishandisa izvo zvakapihwa nemudzidzisi wekirasi yemwana wako. Kana usina mashoko aya, tapota paemail hofisi pamusoro office@pgps.porticoacademytrust.co.uk .
Kana mwana wako achibva kuchikoro kwezuva rimwe chete apo vakamirira zvawanikwa pabvunzo, pachave nemabasa anowanikwa kuburikidza neSeawaw izvo zvinobatsira kuchengetedza hunyanzvi hwakakosha senge chiperengo uye nguva matafura. Kana mwana wako achifanira kunge asiri kuenda kuchikoro kwenguva yakareba, semuenzaniso semhedzisiro yemuyedzo mumba, zvidimbu zvitatu zvebasa zvichaitwa kuti zviwanikwe kwavari kuti vapedze kubva pazuva rechipiri rekusavapo kwavo. Izvo zvakakosha kuti vapedze iri basa kumisa mwana wako kubva pakurasikirwa nedzidzo yake. Kana ivo vasingakwanise kuwana iro basa nekuda kwekushaikwa kwechigadzirwa kana internet kubatika, ndapota nyorera chikoro pane email kero iri pamusoro uye isu tinokweretesa iwe Ipad uye / kana wifi dongle.
Iri basa rinofanirwa kupedzwa pakupera kwezuva rechikoro kuitira kuti mudzidzisi akwanise kuona nekupindura kune iro basa zuva rinotevera racho risati rasvika.
Kana Mapoka evana Asiri Kuchikoro
Muchiitiko chekuti kirasi, boka regore kana chikoro chose chatumirwa kumba, kupihwa kwacho kuchasiyana zvishoma. Vana vacharamba vachiwana kudzidza kwavo kuburikidza neSeawaw uye ivo vacharamba vachiwana zvidzidzo zvitatu pazuva, asi chimwe chezvidzidzo izvi chichaitiswa 'live' kuburikidza neMicrosoft Teams. Icho chinongedzo chezvidzidzo izvi chichagovaniswa nevana kuburikidza neSeawaw. Hapana zvekuwedzera zvekupinda zvinodikanwa.
Tinokumbira vabereki nevachengeti kuti vaone kuti vana vavo varipo panguva yakatarwa yezvidzidzo zvavo zveupenyu uye kuvatsigira pazvinenge zvakakodzera nebasa ravo. Tinokumbira zvakare kuti vana vabatanidze zvidzidzo izvi kubva mukamuri rekudyidzana mumba seimba yekubikira kana yekutandarira.
Isu tese tinotarisira kuti matanho aya achashomeka mukushandisa kwavo, asi chokwadi chatiri kurarama ndechekuti COVID iripano kuzogara kuitira ramangwana rinotaridzika. Saka isu tese tinofanira kunge takagadzirira kuona kuti kudzidza kwevana hakutambure. Tinokutendai nerutsigiro rwenyu.